Mangataka fiara hitondrana gadra ny Lehiben’ny fonja
Anisan’ny fonja be olona mifonja tokoa amin’izao fotoana izao ny fonjan’Antsirabe. Arakan y voalazan’ny Lehiben’ny fonja any an-toerana, Razafimbelo Antoine de Padoue, dia miisa eo amin’ny 527 no voafonja ao an-toerana amùin’izao fotoana raha tokony ho 200 no zakan’io fonja io. Marihina fa ny 25 amin’ireo voafonja ireo dia TPF na miasa an-terivozona mandrapahafatiny, misy 2 ihany koa voaheloka ho faty mihitsy.Amin’izao fotoana dia misy ny ezaka entin’ny Lehiben’ny Fonja hanatsarana ny fomba fiainan’ireo voafonja ao an-toerana. Tafiditra amin'izany ny fanitarana ny trano, ny fampidirana ny taranja fampianara ao anatin’ny fonja ary ny fananganana lasapely na toerana toerana iray natokana hivavahana ao an-toerana ihany koa.
Ny ACP na Aumônerie Catholique des Prisons no niara-niasa sy nifanome-tanana tamin’ny Lehiben’ny fonja tamin’izao ezaka fanatsarana goavana natao tao amin’ny fonjan’Antsirabe izao.Tsara ho marihina fa na dia misazy aza no nitazonana ireo olona ao amin’ny fonjan’Antsirabe, dia misy milofo mianatra ihany koa ireo tanora mbola ao anatin’ny taona tokony hianatra. Tovolahy 4 no fantatra fa niatrika ny fanadinana ara-panjakana CEPE izay efa vita ny 17 Jolay lasa teo. Tovolahy miisa 7 ihany koa amin’izao fotoana no miatrika ny fanadinana BEPC.
Ambonin’izany, dia misy ihany koa ny fampinarana ny taranja asa-tanana, toy ny petakofehy ao amin’ny fonjan’Antsirabe. Eo amin’ny 170 ankehitriny ireo lehilahy manaraka izany fampianarana zaitra izany ao an-toerana. Na dia izany aza anefa ny ezaka lehibe ataon’ny mpitantana ny fonja ao Antsirabe hoentina hanatsarana ny fomba fiainanan’ireo voafonja dia mbola misy ihany ny indro kely. Mitaraina sy mangataka ny Lehiben’ny fonja ny mba hanomezan’ny Fanjakana azy ireo fiara fitondrana ireo voafonja ireo. Tsy mba manana ireny fiara fitondrana gadra ireny mantsy ity fonja ity ka mandeha an-tongotra ireo gadra rehefa hoentina hotsaraina. Sarotra be anefa ny fanaraha-maso sy ny fiambenana azy ireo amin’izany, hoy ny Lehiben’ny fonjan’Antsirabe, Razafimbelo Antoine de Padoue.
Ny fonjan'Antsirabe. (Sary : Nanouh)